အများသုံးသတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းများကဘာတွေလဲ။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / အများသုံးသတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းများကဘာတွေလဲ။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-12-21 မူလ:ဆိုက်ကို
သတ္တုပြုပြင်ခြင်း၏ပထမအဆင့်မှာဖြတ်တောက်ခြင်း,ရိုးရိုးအကေြာင်းဖြတ်ခြင်းသွားကုန်ကြမ်းသို့မဟုတ် tသူလွတ်ဖြစ်ခြင်းပုံသဏ္ shape ာန်ခွဲခြားခြင်းဖြင့်ရရှိသော။ ဘုံသတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းများတွင်ကြိတ်ခြင်းဘီးဖြတ်တောက်ခြင်း, ဖြတ်တောက်ခြင်း, Flame ဖြတ်တောက်ခြင်း, Plasma ဖြတ်တောက်ခြင်း, လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ရေတွင်းဖြတ်တောက်ခြင်း, သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများပါဝင်သည်သတ္တုဖြတ် grinder ကိုဖြတ်,သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်ကြိတ်စက်,သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံး grinderစသည်တို့ကိုစသည်တို့
ကရန်ဘုံဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ခံယူသံမဏိကိုဖြတ်ရန်မြန်နှုန်းမြင့်လှည့်လည်သောဘီးလှည့်သောဘီး။ ကြိတ်သောဘီးဖြတ်တောက်ခြင်းသည်အလင်း, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေသည်။ ကျယ်ပြန့်သည်စာချုပ်အထူးသဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတွင်းပိုင်းအလှဆင်တွင်အထူးသဖြင့်အချို့သောအခါသမယများတွင် ed ။ အဓိကအားဖြင့်အချင်းတစ်စတုရန်းပြွန်အချို့, ပတ်ပတ်လည်ပြွန်နှင့်အထူးပုံသဏ္ဌာန်းသောပြွန်များကိုဖြတ်တောက်ရန်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
SM Black ကို Slot မှခွဲထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းကိုလွှမှုတ်ရန်နည်းလမ်းကိုစောစောဟုခေါ်သည်။Sawအကေြာင်းဖြတ်ခြင်းဖြစ်လုပ်သည် မီတာအားဖြင့်etal တီးဝိုင်းမြင်နေစက်။ ဖြတ်တောက်ခြင်းပစ္စည်းသည်သတ္တုပြုပြင်ခြင်း၏အခြေခံလိုအပ်ချက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ Sawing Machine သည် standard machine machine striguration ကိုပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်လျော်သော Saw Blade ကိုပစ္စည်း၏ခိုင်မာမှုအရသိရှိရန်နှင့်အကောင်းဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်းမြန်နှုန်းကိုညှိရန်လိုအပ်သည်။
3. မီးလျှံCutting (Gဖြစ်.Cအသုံးအဆောင်)
မီးလျှံဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်သတ္တုကိုအပူပေးရန်, acetylene သို့မဟုတ်သဘာဝဓာတ်ငွေ့မကြာခဏ ဦးတက္ကသိုလ်အပူဓာတ်ငွေ့အဖြစ် ed ။ Flame ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ကာဗွန်ပြားများကိုသာဖြတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သံမဏိသို့မဟုတ်ကြေးနီလူမီနီယမ်ကဲ့သို့သောအခြားသတ္တုအမျိုးအစားများအတွက်မသင့်တော်ပါ။ Flame ဖြတ်တောက်ခြင်း၏အားသာချက်မှာကုန်ကျစရိတ်နည်းသည်နှင့်အများဆုံးဖြတ်တောက်မှုအထူနှစ်ခုမီတာအထိရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ အားနည်းချက်များမှာအပူထိခိုက်နစ်နာသောဇုန်နှင့်အပူဓာတ်ပြုခြင်းအတော်အတန်ကြီးမားသည်. Tသူကအပိုင်းတွင်ကြမ်းတမ်းသည်နှင့်များစွာသောရှိပါတယ်hAnging slags။ နောက်ဆက်တွဲအပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်းစားခြင်း, ထောက်ပံ့ကြေးပိုများသင့်သည်။
4. Plasma ဖြတ်တောက်ခြင်း
Plasma ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းသည်အပြောင်းအလဲနည်းလမ်းဖြစ်သည် ပြုလုပ်sအဆိုပါ workpiece ခွဲစိတ်မှာသတ္တုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရည်ပျော် (နှင့်ထွေးထွေးမှု)နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန် Plasma arc ၏အပူနှင့်ခွဲစိတ်ဖွဲ့စည်းရန်အရည်ကျိုသတ္တုဖယ်ရှားပစ်နှင့်မြင့်မားသောမြန်နှုန်းပလာစမာ၏အရှိန်အဟုန်။ Plasma သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အထူ 100 မီလီမီတာအောက်ရှိအထူဖြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
လေဆာရောင်ခြည်သည်အပူနှင့်ဖြစ်သည်။ဒေသဆိုင်ရာပစ္စည်းများဖြတ်တောက်ခြင်းကိုဖြည့်စွက်ရန်သတ္တုအရည်ပျော်နှင့်အငွေ့ပျံနှင့်စွမ်းအင်လေဆာရောင်ခြည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်စာချုပ်သံမဏိပြား (<30 မီလီမီတာ) ၏မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်တိကျသောဖြတ်တောက်ခြင်းများအတွက် ed ။ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းအရည်အသွေးအလွန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်. NOT ဖြတ်တောက်ခြင်းမြန်နှုန်းသည်အစာရှောင်ခြင်း, ရှုထောင့်တိကျမှုသည်အလွန်မြင့်မားသည် (± 0.05 မီလီမီတာအထိ). AND သည်လေဆာရောင်ခြည်သည်အလွန်သေးငယ်သော area ရိယာတစ်ခုတွင်လုပ်ဆောင်နေသဖြင့်အပူထိခိုက်နစ်နာမှုဇုန်သည်အလွန်သေးငယ်ပြီးအလုပ်ခွင်သည်ပုံပျက်နေပြီးဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးကိုဖြတ်တောက်ခြင်းအရလေဆာသည် Plasma ထက် သာ. ကောင်းသည်. In ဖြတ်တောက်ခြင်းနှုန်းအရ plasma လေဆာထက်ပိုမြန်သည်။
ရေဂျက်လေယာဉ်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်သတ္တုဖြတ်တောက်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်မြင့်မားသောဖိအားရေ။ စဉ်ဆက်မပြတ်နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့်အတူ Garnet နှင့်ရောနှောမြင့်မားသောဖိအားရေနှင့်အတူသဲ,eMeryအမှုန့်နှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းမြန်နှုန်းနှင့်အထူ (200 မီလီမီတာအထိ) ကိုတိုးတက်စေရန်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုကူညီရန်အခြားပဒရို့သည်အခြားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုကူညီရန်။ ရေဂျက်လေယာဉ်ဖြတ်တောက်ခြင်း၏တိကျမှန်ကန်မှုကို± 0.4 မီလီမီတာနှင့်အထက်သို့ရောက်နိုင်သည်။Any ပစ္စည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ဖြတ်ခြင်းw နှင့်အတူantter ဓါးဏne အကြိုက်ဆုံးကွေး၏ ne time ။ရေဂျက်လေယာဉ်၏အကြီးမားဆုံးအားသာချက်မှာဖြတ်တောက်ခြင်းကာလအတွင်းထုတ်လုပ်သောအပူကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်မြန်ဆန်သောရေဂျက်လေယာဉ်များကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားပစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အပူအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။
ထို့အပြင်အချို့သတ္တုကြိတ်စက်ဒါ့အပြင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်စာချုပ်အပါအဝင်သတ္တုဖြတ်ဖို့ edသတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်ကြိတ်စက်,သတ္တုဖြတ် grinder ကိုဖြတ်စသည်တို့ကိုစသည်တို့
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်အမျိုးမျိုးသောသတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းများကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်အခြေအနေအရရွေးချယ်နိုင်သည်။DIY ပါဝါကိရိယာများပါဝင်အိတ်ဆောင်လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်း,လျှပ်စစ်အရောင်တင်သူ, ပါဝါ Tool ကို combo ပစ္စည်းများစသည်တို့ကိုစသည်တို့
ကြိုးမဲ့အိတ်ဆောင်ထွင်းထု carver variable ကိုမြန်နှုန်းကြိတ်စက် Type Wyme လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်အသစ် Woodworking ပါဝါကိရိယာများ DIY ပါဝါကိရိယာများ စံပြပါဝါ tools များ လျှပ်စစ်အသေးစားကြေးကြေးဘောပင် သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံး grinder Stone Grinder လျှပ်စစ် Stone Grinder စျေးနှုန်း